Iseva yokulungiselela yase-Afrika idala indawo yokubeka ulwazi ngocwaningo lwe-coronavirus - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-19th Ngo-Mashi 2020 I-19th Ngo-Mashi 2020
Ishicilelwe ekuqaleni researchprofessionalnews.com/rr-news-africa ....../
Iminikelo yeGrassroots ifune ukudonsa ukusebenzisana nokwabelana ngemininingwane
Insizakalo yamahhala yokulungiselela i-AfricArXiv idale i-hub yolwazi lapho ososayensi nabanye bangangeza khona imininingwane nge-coronavirus yenoveli ukusiza ukuqondisa impendulo yezwekazi.
I-AfricArXiv isungule idokhumenti yakwaGoogle ne-Github repository lapho noma ngubani angangeza izinsiza ezihambelana nomongo wase-Afrika ngegciwane le-SARS-Cov-2 kanye nokugula okuhlobene nalo i-Covid-19.
Lokho kungafaka imininingwane efana ne-Afrika ethile noma i-infographics eqondene nomhlaba jikelele, noma imihlahlandlela yezenzo zomphakathi, ngezilimi ezahlukahlukene. Isisetshenziswa singaphinde sikhombe imishini etholakala ngelebhu, njengemishini ye-PCR, engahanjiswa ngemizamo yemibuzo yokuphendula ye-Covid-19 yamazwe.
I-KiaArXiv inxusa abacwaningi ukuthi balethe noma yiluphi ucwaningo olufanele lwe-Covid-19 kanye nemibhalo njengamadokhumenti emibhalo ukuze bafakwe kwiwebhusayithi yesevisi. Inkinga ye-coronavirus eqhubekayo ikhombisa kahle isidingo sesayensi evulekile, kusho uJo havemann wase-KiaArXiv.
Lolu hlelo akumele lubonwe njengele-AfricArXiv, kusho yena. "Sihlose ukusebenzisana futhi sizama ukusebenzela abanye ababambiqhaza, izinhlangano kanye nezinhlelo zokulwa nezinhlangano kanye nezinhlangano ezizosebenzela izinhlangano zase-Afrika ngolwazi lobuciko bomlingani ngamunye ukunciphisa imiphumela yalolu bhubhane."
UJoy Owango, umqondisi omkhulu ophikweni olusebenza kwezokuxhumana kwezesayensi iTCC Africa kanye ne-KiaArXiv, uthe "kuyishwa" ukuthi kube yinhlekelele ukubona ukubaluleka kwesayensi evulekile.
Isayensi evulekile ayisakhuthaziwe ngentshiseko kwezinye izingxenye zezwekazi, kusho yena. "Abanye ososayensi bakhetha ukungazishicileli kumapulatifomu okufinyelela okuvulekile njengoba amanye amaphephabhuku anezinto ezinomthelela omkhulu asasetshenziswa njengesisekelo sokwenyusa."
“Kodwa-ke, kudingeka ipulatifomu efana ne-AfricArXiv ekubonakaleni kocwaningo lwase-Afrika. Akufanele silinde inhlekelele ukuze sibone ukubaluleka kwesayensi evulekile, kodwa sikwenze kube yinto ejwayelekile, ”wanezela.
Categories:	Vula UkufinyelelaPublishing
sit mattis facilisis ipsum consectetur Praesent sem, justo commodo pulvinar